Beled-Wayne: Roobabka dhaliyay Fataahadda Wabiga oo wali da’aya iyo Barakaca oo sii soconaya!! | Shabakada Alshahid
Beled-Wayne: Roobabka dhaliyay Fataahadda Wabiga oo wali da’aya iyo Barakaca oo sii soconaya!!
Added by Webmaster on October 3, 2012.
Saved under Faaqidaad, Muuji, Sawirada, Warar, Warbixin
Biyaha Wabiga oo Xaafadaha Beled-Wayne buux dhaafiyay
Beled-Wayne (Alshahid)- Waxaa wali ka soconaya magaalada Beled-Wayne ee xarunta gobalka Hiiraan Barakaca ay samaynayaan dadka deegaanka ka gadaal markii Wabiga Shabeele uu Biyo badan kusoo fatahiyay gudaha magaalada.
Fatahaadda Wabiga oo sida la sheegay ka dambeysay Roobab xoog leh oo maalmihii lasoo dhaafay ka da’ayay halkaas ayaa waxaa ka dhashay burbur soo gaaray guryo fara badan, Hanti noocyo kala duwan leh oo baaba’day iyo khasaaro nafeed oo aan si toos ah loo cayimin.
Biyaha Wabiga oo fariistay aqalada dhexdooda iyadoo dadkuna ay agabyadooda la baxayaan
Biyaha Wabigu waxay gudaha u galeen Guryaha iyo goobaha ay dadku ku noolyihiin ee magaalada, iyadoo Telefishinada Soomaalida laga daawanayay muuqaalo naxdin leh oo halkaas lagasoo qaaday iyo Dadka oo ku dhex soconaya Biyo dhererkoodu uu qarinayo jooga qofka.
Fiiraashyadii ay dadku guryaha kula seexanayeen iyo agabyadii kale ee guryaha yiilay ayaa lagu arkayay magaalada dhexdeeda iyagoo dul sabeynaya Biyaha aadka u badan ee halkaas kusoo rogmaday, taasi oo keentay in xaalad nololeed oo aad u daran ay galaan dadka magaalada ku nool.
Inta badan dadka ayaa dhowrkii maalmood ee tagtay isaga cararay gudaha magaalada, waxayna u jiheysteen duleedyada oo ay miciin bideen si ay halkaa uga dhigtaan meel ay kaga gabaadsadaan hoy la’aanta iyo dhibaatada ay Fatahaadyadu magaalada gudaheeda ka geeysteen.
Waxa jiray hay’ado iyo Shirkado aan badnayn oo u gurmaday dadkaas, walow qayla-dhaanta dadka kasoo yeereysa ay tahay mid aadu saraysa oo gurmadka haatan la gaarsiiyay aanu dabooli karayn.
Shirkadda Hormuud ayaa ka mida dhinacyada u gurmaday dadkaas, waxaana wararka illaa iyo haatan laga helayo deegaanada ay dadku u carareen ay sheegayaan inay Shirkaddu halkaas wali kasii wado howlo isugu jira qaybinta Cuno, Baco iyo waxyaabo kale oo ay dadku hoy iyo gabaad ka dhigtaan.
Gudaha magaaladana waxaa maanta lagasoo sheegayaa in tiro badan oo dadkii halkaa ku haray ah la arkayay iyagoo intii ay gacantoodu soo qaban kartay oo Agabyadii guryaha ah kusoo qaatay Gaari-Dameer unasoo jiheystay dhanka deegaanada Ceel-Jaale iyo Jante-Kuun-Dishe oo duleedka Beled-Wayne ah, halkaas oo dadkii horay u cararay ay kusii suganyihiin.
Dadka maanta magaalada ka baxay qaarkood oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay heleen fursad ay guryahooda ugaga bixi karaan oo ay magaalada oo dhami ugasii barakici karaan maadama ay yaraadeen Biyihii badnaa ee yiilay Wadooyinka iyo guryaha dhexdooda.
Waxaa wali magaalada ku hooray Roobab aad u xoogan, kuwaas oo abuuraya jawi cabsi leh oo dadku ay qabaan iyagoo muujinaya sida ay uga baqanayaa inay Roobabkaas oo markii horaba Fatahaadda sabab u ahaa ay mar kale Biyo badan dhigaan Wabiga sidaasna uu kusii karaar jabsado Wabigu oo uu ugusoo rogmado magaalada gudaheeda.
Dowladda Soomaaliya oo madaxweynaheedu uu Shalay kormeer ku tagay Beled-Wayne ayaa iyadu shaacisay inay aad uga walaacsantahay xaaladda halkaa ka jirta. Waxayna dowladdu u tacziyeeysay dadkii dhibaatada kala kulmay Fatahaadda iyadoo ku baaqday gurmad deg deg ah oo dadkaas lala gaaro.
Wixii kusoo kordha xaaladdda dadka la dhibaatoonaya Fatahaadda ka dhacday Beled-Wayne waxaan idinkugusoo gudbin doonnaa Wararkeena soo socda Insha allah.